मलेसियामा शंकास्पद मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याइयो, बुबाले ठगेको भन्दै पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पाका छोरा ‘सिधाकुरा’मा !(भिडियो) « News24 : Premium News Channel
मलेसियामा शंकास्पद मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याइयो, बुबाले ठगेको भन्दै पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पाका छोरा ‘सिधाकुरा’मा !(भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३६५ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विगतका एपिसोडहरुमा जस्तै विभिन्न विषयमा विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । साथै विशेष ब्यक्तित्वहरुसँग विभिन्न विषयमा प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छः
१. मलेसियामा शंकास्पद मृत्यु भएका नेपालीको शव छानविन विनानै नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं । सर्लाहीका शिवजी महतोलाई रोजगारीका लागि मलेसिया गएको उनका छोरा विशेश्वर महतोको हार्टअट्याक भयो भन्दै उमेश बैठाले फोन गरे । फोनमा भनियो विशेश्वरलाई दिलको दौरा परेका कारण अस्पताल लगियो । तर पछि तिनै व्यक्तिले विशेश्वरको मृत्यु भएको भन्दै शव ल्याउनक लागि छिटो–छिटो वडा कार्यालयको सिफरिस पठाउन भने । परिवारले एजेन्टलाई फ्याक्स गरी शव झिकाउन सिफरिस पठायो ।
२. बुबाले ठगेको भन्दै पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पाका छोरा गणेश ‘सिधाकुरा’मा
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पाले छोरा गणेश शेर्पालाई अंश दिने आशमा फसाएको आरोप छोराले लगाएका छन् । ५ बर्षदेखि अदालतमा चलिरहेको अंशमा मुद्धामा कृपाशुरले १ करोड ६५ लाख नगद र दुई रोपनी जग्गा दिने भन्दै बाबु छोराबीच सम्झौता गरेका थिए । कृपासुरले १ करोड ६५ लाखको चेक काटेर छोरालाई देखाए तर पछि दिइहाल्छु भन्दै आँफै राखे । चेक देखाउँदै दशलाख रुपैयाँ नगद दिएर सबै पैसा बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । तर जब कागजमा गणेशले हस्ताक्षर गरे, तब कृपाशुरले गणेशको नाममा दिएको १ करोड ६५ लाखको चेक च्यातिदिएको उनका छोरा गणेशको आरोप छ ।